Software Popular – Android – Page 6 – Vessoft
Software Popular – Android – Page 6
Tafatirka Text Xusuus qor ayaa elektaroonik ah in la abuuro qoraalada gaar ah iyo xusuusinta iyadoo ay xulashada ah si ay u kala soocaan by midabo iyo qaybaha kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Speedtest 3.2.14
Imtixaanka Fududahay in la isticmaali codsiga si aad u hubiso xawaaraha ee la xidhiidha internetka. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan xawaaraha la isugu gudbiyo ama qaabilaadda ee xogta.
العربية, English, Українська, Français... Pokemon GO 0.37.1
العربية, English, Українська, Français... Imgur 2.4.6.205
Network Bulshada Photo software ah in geliyaan sanamyadii kala duwan oo GIF-animation si ay hawsha loo jecel yahay. software The awood u dhigay ciyaartoyda iyo faallo iyo tiirarkeeda.
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... Mail.Ru 3.1.3.1222
العربية, English, Українська, Français... MX Player 1.7.40
العربية, English, Українська, Français... Amazon Kindle 4.16.0.75
العربية, English, Українська, Français... Total Commander 2.62
English, Українська, Français, Español... 4shared Desktop 3.24
العربية, English, Українська, Français... CPU-Z 1.19